နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ > fileproof ဖိုင်အဖွဲ့
အစိုးရအဖွဲ့2အံဆွဲ2နာရီမီးခံခုခံလက်စွဲစာအုပ်& သော့ခတ်သော့ခတ်
Firefroof ဖိုင်ရေးရခြင်းအဖွဲ့ DR-2 နှစ် ဦး အံဆွဲလုံခြုံမှုသေတ္တာ - Weierxin Safe
* Size: H1530 * W530 * D680mm
* မီးသတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်:2နာရီ
* Lock ကို: LCD ကိုအတူအီလက်ထရောနစ်ဂဏန်းသော့ခတ်
* အားလုံးအံဆွဲတဦးတည်းကို manual သော့ခတ်နေဖြင့်လုံခြုံကြသည်
3 အရွယ်အစား၏ * ရွေးချယ်မှု, 2,3သို့မဟုတ်4အံဆွဲ 'ဗားရှင်း
1. ဒီဝန်ကြီးအဖွဲ့ဖြည့်စွက် fireproof ကျွန်တော်တို့ရဲ့4အံဆွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်စွဲစာအုပ်သော့ခတ်နှင့်အဓိကသော့ခတ်နှင့်တကွကြွလာ။ ငါတို့သည်လည်း3အံဆွဲ,4အံဆွဲစေနိုင်သည်။ client ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပါသည်။
2. ထူခန္ဓာကိုယ်မီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှသင်၏အရေးကြီးသောဖိုင်များကိုအစောင့်ရှောက်များနှင့် thelf ထံမှ secure နှင့်ကမ်းလှမ်းမှု 120 မိနစ်မီးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သံမဏိလျှောနှင့်အတူအပြည့်အဝအံဆွဲ access များအတွက်အဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေး။
စံအဖြစ်တပ်ဆင်ထား 3. High-လုံခြုံရေးသော့ခလောက်။ လွတ်လပ်သောအံဆွဲသော့ခတ်ယန္တရား။
ဖြေ။ ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား, ထုပ်ပိုး, အရောင်နှင့်လိုဂိုကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
* မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - 120 မိနစ်* အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးသော့ခတ်စံအဖြစ်တပ်ဆင်ထားသည်ရုံးအာကာသ, A5, A4 ကိုအပြည့်အဝအသုံးချရန်သိုလှောင်နိုင်သည့်သိုလှောင်မှုပမာဏ& မိုက်မဲသောဆိုင်းထိန်းထိန်းသိမ်းရေးဖိုင်များ* အံဆွဲတစ်ခုစီသည်တစ် ဦး ချင်းစီကိုမီးနှင့်ဆန့်ကျင်။ အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့်အကာအကွယ်ပေးရန်သံမဏိဂျာကင်အင်္ကျီတွင်နေရာချထားသည်။* လွတ်လပ်သောအံဆွဲသော့ခတ်ယန္တရား* အံဆွဲအားလုံးသည်လက်စွဲသော့ခတ်ခြင်းဖြင့်လုံခြုံမှုရှိသည်* အရွယ်အစား, 2,3သို့မဟုတ်4အံဆွဲဗားရှင်းများ၏ရွေးချယ်မှု